njanji 5: You Don't Know — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Nzira une kundimedza saka yakakwirira handioni ini achiburuka
Dai waiziva chii ndakaenda kuburikidza, asi ndiri achakamira ikozvino
Uye munoziva handina hanya pasina ruvengo
makore aya vari chiso changu
Ndinowana yepamusorosoro, yepamusorosoro, yepamusorosoro
Hamuzivi zvaakaita kwandiri
Revhiatani yakakwirira uye ndiri kunzwa wakasununguka
Vakapindira ini achifunga Cleveland apo vakati kuti Lebron shure
I Wanna uzvirasire vaipemberera vane semastreamer uye nezvose, Ndiri kunzwa zvakanaka
Uye kana ukaverenga kuti King James
Unogona kutaura I ivo zvakanaka, Ichikangamwa Kumbonetswa mvura
Kanganwa pamusoro dutu makore pamusoro musoro wangu
Bruh handigoni kunzwa pasi, hapana zvimiso makumbo angu
Ndiri kukukurwa kure nhasi pasina hapana mubhedha
Tsoka akarembera sezvinoita vamwe dreads, asi regai vanomonyanisa zvandakataura
Kana ini ndikati ndiri ikayangarara sezvo nokusingaperi
Handisi kureva kuti Denver maira mukuru ruzha, Ndinogona kuita nani
Handina mhuka panze mavari ruzha usiku makirabhu, Ndine nokusingaperi
With Wokumusorosoro I depends jackpots pasina hapana mhikuriso
Regai kuva pachena, Mwari chete ndinotya
Anogara pakakwirira uye tsvene uye BRO Akamuka ini pano
mweya wangu vakapindira yatenga uye chivi changu pavakabhabhatidzwa ndokupfura kure
Hakuzovi hapana anodzoka, kugadzirira ubvise
Brandon • Zvita 9, 2014 pa 5:24 ndiri • pindura
rwiyo urwu… Mwari vakuropafadzei rwendo kwazvo. Uye iwe uchanaya nokukurumidza kana Ishe anotaura zvakafanana.
Jimmy • Ndira 21, 2016 pa 3:00 pm • pindura
Just achishamisika – anoita chikamu pamusoro “Obama Biden” zvinoreva kuti iwe akavhotera uye / kana kutsigira Obama kuti utungamiriri? SomuKristu, Ndinoda kutsigira mutungamiri ane African-American – asi hazvisi pachena kuti Obama inotsigira zvimwe vasingadi zvinhu? I kufungidzira uri kubatikana chaizvo, asi ngaavongwe pachine nokuda kwenyu hanya.